Real Madrid Oo Guul Xummad-Jebin Ah Ka Gaadhay Leganes – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaReal Madrid Oo Guul Xummad-Jebin Ah Ka Gaadhay Leganes
Gool uu dhamaadkii ciyaarta u dhaliyey Marco Asensio ayaa Real Madrid u saamaxay inay guul dirqi ah ka gaadho kooxda yar ee Leganes oo ay isku haleeleen lugta koowaad ee tartanka Copa del Rey oo marxaladda Semi Finalka loo gudbayo.
Real Madrid oo ay ka maqnaayeen ciyaaryahannada hoggaamiya sida Ronaldo, Bale, Marcelo iyo Benzema ayaa sidoo kale kaydka gelisay Toni Kroos, Modric iyo Isco, waxaana safkeeda ay ku bilowday ciyaaryahanno da’yar ah oo uu calaamadda kabtanka u sitay Raphael Varane.
Safka hore ee weerarka ayaa waxa uu Zidane iska garab ciyaarsiiyey, Mayoral, Vazquez iyo Asensio, waxaana uu ku kabay khadka dhexe oo ay is dhinac taagnaayeen Ceballos, Llorente iyo Kovasic, halka difaaca ay tiir adag noqdeen Varane, Carvajal, Nacho oo beddelay Vallejo oo dhaawac lagu saaray bilowgii ciyaarta iyo Theo.
Labada kooxood ayaa sameeyey qaybta hore dedaallo badan, iyadoo Leganes ay ku dhowaatay inay gool dhaliso, halka Real Madrid ay iska khasaarisay fursado ay adag tahay in la cuno, waxaase ay ku kala nasteen goolal la’aan.
Qabtii labaad markii lagu soo noqday, waxay labada macalin sameeyeen isbeddelo. Real Madrid waxa garoonka soo galay Isco iyo Modric, kuwaas oo dardar geliyey khadka dhexe oo markii hore yara liigayey.
Dhamaadka ciyaarta oo ay hal daqiiqo ka hadhsan tahay ayaa uu Theo kubbad kasoo dhiibay baasha bidix, waxaana laag qurux badan la helay Asensio oo guul dirqi ah ku hoggaamiyey kooxdiisa.
Ciyaartan oo ahayd lugta koowaad, ayaa ay Madrid la hoyatay farxad aan cago adag ku taagnayn, maadaama Arbacada ay garoonka Santiago Bernabeu ku wada ciyaari doonaan lugta labaad.
Guushan ayaa Real Madrid u ahayd mid ay ku diirsatay maadaama afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey aanay guul u damaashaadin.
Dhinaca kale, goolka uu Asensio dhaliyey ayaa soo afjaray 11 ciyaarood oo ay haysatay abaar dhalinta goolasha ah.
AC Milan 2-1 Bologna – All Goals and Highlights
Alvin Kamara crowd TD celebration : Saints vs Redskins Week 11
West Ham United 2-1 West Bromwich Albion – highlights & Goals